Saint Lucia, izay lasa firenena / fanjakana mahaleo tena tamin'ny 22 feb. 1979.
Ny renivohitra (Castries) no misy ao amin'ny faritra avaratry ny nosy ary mampiseho 40% eo ho eo amin'ny mponina izy.
Ny ivon-toerana lehibe indrindra dia ny Vieux-Fort ary Gros-Islet.
Toerana sy toetrandro
St Lucia dia manana toetrandro mafana sy tropikaly mandritra ny taona, voalanjalanjan'ny rivotry ny varotra avaratra atsinanana. Ny mari-pana salanisa isan-taona dia tombanana eo anelanelan'ny 77 ° F (25 ° C) sy 80 ° F (27 ° C).
Fitsaboana omena manerana ny firenena. Misy tobim-pahasalamana telo amby telopolo (33), hopitalim-panjakana telo (3), hopitaly tsy miankina iray (1) ary iray (1) hopitaly ara-tsaina.
Ny taom-pianarana dia manomboka amin'ny septambra ary mifarana amin'ny volana jolay. Mizara telo ny taona (septambra ka hatramin'ny desambra; janoary ka hatramin'ny aprily ary aprily ka hatramin'ny jolay). Ny fidirana amin'ny sekolin'ny nosy dia mitaky ny fanomezana ny sora-tanan'ny mpianatra sy ny taratasy fanatrehany avy amin'ny sekolin'izy ireo teo aloha.
Ny fanatanjahan-tena malaza indrindra eto amin'ny nosy dia ny cricket, ny baolina kitra (soccer), ny volley, ary ny lomano. Ireo atletantsika malaza indrindra dia i Daren Garvin Sammy, kapitenin'ny ekipan'ny West Indies Twenty20; Lavern Spencer, mitsambikina ambony ary Dominic Johnson, trano fitehirizam-bato.
Ny Pitons dia tendrombohitra volkanika no tranokalan'ny Lova Iraisam-pirenentsika manokana any St. Lucia, mampifandray ny amboara antsoina hoe Piton Mitan. Ny Tendrombohitra Piton roa angamba no endri-tsary indrindra eto amin'ny nosy. Ny lehibe kokoa amin'ireto tendrombohitra roa ireto dia antsoina hoe Gros Piton ary ny iray kosa antsoina hoe Petit Piton.
Ny Sulfur Springs malaza dia faritra mafana sy mavitrika indrindra ao amin'ny Lesser Antilles. Manodidina ny 45 ha no misy ilay valan-javaboary ary lafo izany satria volkano afa-tsy any Karaiba. Misy dobo mafana misy olona izay matetika ny mponina sy ny mpitsidika matetika no manasitrana ny rano manankarena amin'ny mineraly.
Saint Lucia dia manana ny mampiavaka azy manana ny be indrindra amin'ny Nobel Laureates isaky ny olona eto amin'izao tontolo izao. Derek Walcott dia nahazo ny loka Nobel tamin'ny literatiora tamin'ny taona 1992 ary i Sir Arthur Lewis dia nahazo ny loka Nobel tamin'ny toekarena tamin'ny 1979. Ireo roa mpandresy dia nizara ny tsingerintaona nahaterahan'ny 23 Janoary, 15 taona monja ny elanelany.
Mponina: Tokony ho 183, 657
Faritra: 238 km kilometatra / 616.4 km km
Teny ofisialy: anglisy
Fiteny eo an-toerana: French Creole
Ny literatiora efa lehibe: 72.8% (Sivana 2010)
Vola: Dolara Karaiba Atsinanana (EC $)
Tahan'ny fifanakalozana: US $ 1 = EC $ 2.70
Faritra: EST +1, GMT -4